“एक सर्को माया” छोटकरीमा « Nepal'S Largest Digital Online Newspaper (Magazine)
“एक सर्को माया” छोटकरीमा
“एक सर्को माया” बुलबुल पब्लिकेसन्सले २०७५ वैशाखमा बजारमा ल्याएको हो । “एक सर्को माया” का सर्जक जिएस पौडेल रहेका छन् । नेपाल र माल्दिभ्सको सेरोफेरोमा रहेको यो उपन्यासमा पात्रहरू पनि नेपाली र माल्दिभियन नै भेटिन्छन् । पौडेलको यो पहिलो उपन्यास हो । विमोचन को २१ औँ दिनमा दोस्रो संस्करण बजारमा ल्याएर उनले आख्यानमा गतिलो फड्को मारेका थिए भन्ने प्रमाण पनि हो । विशेषतः प्राय पुस्तकमा यो पछि त्यो होला वा त्यो पछि यो होला भनी अध्ययन गर्ने पाठकलाई चाहिँ “एक सर्को माया” ले रनभुल्ल बनाउँछ । नेपाली आख्यानमा यो धारको पुस्तक न्यून नै छ ।
आलोक पात्रको मुख्य भूमिकामा छन् । उनी दुबईबाट जागिरको सिलसिलामा माल्दिभ्स पुग्छन् । माल्दिभ्समा नारायण चालिसे उर्फ चालिसेसँग नजिक रहेर कथा बगेपनि चालिसेको नेपाल फिर्तीले कथालाई नयाँ मोडमा लगेको भेटिन्छ । पौडेलले उपन्यासभित्र परदेश गएका पुरुषहरूको स्वभाव (सबै होइन केहीको हदमा ) चालिसेको पात्रमा उतारेका छन् ।
चालिसे माल्दिभ्सकी माज्दासँग प्रेममा पर्नु र कुराकानी फेसबुकमा हुनु त्यतिबेलै नेपालबाट चालिसेकी छोरीले ल्यापटप मगाउँदा चालिसेले आफैँले प्रयोग गर्दै गरेको ल्यापटप पठाउनु यस उपन्यासको कथा भित्रको कथा हो । तर, ल्यापटप नेपाल पुगेपछि फेसबुक नै लगआउट नभएको र माज्दासँगको कुराकानी आमाछोरीले पढेपछि यता आलोक र चालिसेको मित्रतामा बाँध लाग्छ र चालिसे नेपाल जान्छ र उपन्यासमा चालिसेको भुमिका अन्त्य हुँदछ । ्उपन्यासभित्र एक पात्र छ अहमद जो चालिसेको साथी हो । चालिसेको माध्यमबाट आलोकसँग चिनजान भएपछि यी तीन दुई महिनाको समयमा यति घुलमिल हुन्छन् कि मित्रताको अर्थ यी तीनमा खोजे पनि हुन्छ ।
“एक सर्को माया” मा पौडेलले यौन, धुम्रपान र मद्यपानलाई पुरानै उपन्यासको शैलीबाट उठाएका छन् । तर, धुम्रपानमा भने फरक शैलीमा छ । गाँजालाई सामान उपनाम दिएर पौडेलले कथाभर नै गाँजाको प्रयोग गरेका छन् ।
एकदिन अहमदले चालिसेलाई सामान दिनु भनेर आलोकलाई जिम्मा लगाउँछन् । रक्बोमा बसेर चुरोट सम्झेर आलोकले सामान सल्काउँछन् । र, कथाको लागि आलोकले गाँजा तान्न सुरु गर्छन् । यसैबीच राउधा पात्रको आगमन हुन्छ । जो माल्दिभ्सकी मुस्लिम केटी हुन । आलोक राउधासँग एकतर्फी प्रेममा पर्छन् । केही समयपछि यो एकतर्फी प्रेम दुईतर्फीमा परिणत हुन्छ । आलोक र राउधाको प्रेमको डुङ्गा हृदयको तलाउमा सयर गर्छ । माज्दाकी बहिनी राउधा हो यो कुरा आलोकले थाहा पाउँछ तर राउधासँग आलोकको प्रेमसम्बन्ध छ भन्ने कुरा चालिसेलाई भने थाहा हुँदैन् ।
आलोकको बिजनेस डिलको क्रममा जैरोल्ड पात्रसँग भेट हुन्छ । कुराकानीको क्रममा जैरोल्डले आफ्नो कहानी सुनाउँछ । नेपाल घुम्न गएको, लुसीसँगको प्रेम, यति एयरलाइन्स क्र्यासमा लुसीको मृत्यु आदि । त्यसपछि जेडी उर्फ जय ढकाल पात्रको जन्म हुँदछ ।
कथा बग्ने क्रममा जेडी माल्दिभ्समा भेटिन्छ । र, यस उपन्यास भित्र त्यस्तो कथा पनि समेटिएको छ कि जुन नेपाली समाजसँग सम्बन्धित छ यदि उक्त कथा सत्य हुँदो हो त जातिय भेदभावमा क्रान्ति भएर घटना अमर हुने थियोे । कथा जेडीको बा (होमे) र आमा (फूलमाया) को हो । होमे बाहुन हो भने फूलमाया कामी ।
होमे गोठालो जाने क्रममा फूलमायाको प्रेममा पर्छ आँखैले सही । कारणबस फूलमायाको परिवार बसाइँ सर्छ र दुईको प्रेमको मुना निमोठिन्छ । पुनः फूलमायाको परिवार उहीँ गाउँमा फर्कन्छन् । तर, त्यो अवधिमा होमेको विवाह भएर एक छोरी हुन्छे । फूलमाया गाउँ फर्किएपछि घाँस दाउरा जङ्गलमा होमेको र फूलमायाको प्रेम सुचारु हुन्छ । होमे मध्यरातमा घर मास्तिर बसेर गाँजा तान्दै हुन्छ ।
तल्लो भेगमा कोही रूखतिर लम्केको देख्छ । होमेपनि रूखछेउ पुग्छ त्यहाँ फूलमाया भेटिन्छे उसले आत्महत्याको कारण उसको पेटभित्र भएको भ्रुण, जुन होमेको हो । केही दिनमा गाउँबाट होमे र फूलमाया हराउँछन् । गाउँमा हल्ला कुनै जङ्गली लहरा झैँ फैलिन्छ । होमे र फूलमाया केहीदिनमा गाउँमा देखा पर्छन् । माटोको डल्लाले होमेको ढाडमा भेट्छ, दोस्रो डल्ला आइनपुग्दै होमेले फूलमायालाई छातीमा लुकाउँछ । गाउँको निर्णय बमोजिम होमेले कामी गाउँमा घर बनाउँछ र केही महिनामा जेडी जन्मिन्छ तर फूलमायाको भने मृत्यु हुन्छ । आदि ।
अब कथाले अन्तिम गन्तव्य रोजेको छ । गाँजामा फसेको आलोकलाई राउधाले रङ्गेहात भेट्छे । जुन राउधालाई ड्रग्स सेवन गर्ने मान्छे मन पर्दैन । आलोक र राउधाको प्रेम टुङ्गिन्छ । केही दिनमा राउधा मध्यरातमा देखा पर्छे र सम्भोग पश्चातको गहिरो निन्द्रामा आलोकको मोबाइलबाट सम्पूर्ण प्रमाण मेटाएर जान्छे । पुलिसले आलोकको कोठामा रेड हान्दा गाँजा भेटिन्छ तर जुन गाँजा आलोकको हुँदैन । पुलिसले आलोकलाई लैजाँदै गर्दा राउधा मुसुमुसु हाँसिरहेकी भेटिन्छे । माल्दिभ्स सरकारले आलोकलाई नेपाल पठाउँछ कहिल्यै फर्किन नपाउने गरि ।
आफ्ना अभिभाकत्व सानै उमेरमा गुमाएका आलोकलाई शिक्षा र संस्कार भने स्वयं काकाकाकीले दिएका हुन्छन् । बिहेको दबाबमा होमिएका आलोकलाई राउधाको धोकेवाज प्रेमले सताइरहेको छ । दिन त बित्छ तर रात भने मुस्किलले कट्ने गरेको भेटिन्छ । राउधाले कुनैदिन मेरी नेपाली साथी छे भन्दा आलोकले भेट गराउन त भन्दा राउधाले आलोकलाई शंकाको दृष्टिले हेर्दछे । र , एकदिन राउधाले स्वयं तृष्णालाई आलोकको अपार्टमेन्टमा लिएर जाँदछे ।
पौडेलको उपन्यासमा कथा यसरी बगेको छ । आलोक नेपाल फर्किएपछि एकदिन भरतपुर जाँदै गर्दा उकालो बाटोमा तृष्णा जस्तै कोहि देख्छ । तृष्णा नामले पुकार्छ बाटो र गाडीको ठेलमठेलले उसले तत्काल स्कुटी फर्काउन पाउँदैन । केही दिनमा पेट्रोल पम्प छेउ आलोक उभिरहँदा पुनः तृष्णालाई देख्छ । तर , त्यहाँ पनि कारणबस भेट हुन पाउँदैन । एकदिन गाउँकै कार्यक्रममा आलोकले तृष्णालाई देख्छ । केही दिनमा भेट्ने कुरा गर्दै उनीहरू छुटिन्छन् ।
तृष्णा काठमाडौँबाट फर्किदा आलोकसँग भेट्ने कुरा हुन्छ । र, भेटिन्छन् पनि । तृष्णा राउधाको साथी भएका कारण राउधाको बारेमा तृष्णालाई थाहा छ भनेर आलोकले तृष्णालाई राउधाले मेरो प्रेममा किन यस्तोगरी भनेर सोध्छ । तर, राउधाले तृष्णालाई वचन दिएको खण्डमा तृष्णाले सबकुरा बताउन नसक्ने जिकिर गर्छे । आलोकले तृष्णा “तिमीले प्रेम गर्ने मान्छेको कस्सम” भनेर पासो हालेपछि तृष्णा बाध्य हुन्छे । किनकि तृष्णाले माल्दिभ्समा आलोकलाई मन पराएकी हुन्छे । यो कुरा सुन्दा आलोक अग्लो पहाडबाट खसेको अनुभूति गर्छ ।
चालिसेसँगको सम्भोगपछि माज्दाको पेटमा पिपुरोको आगमन हुन्छ । गर्भपतनको लागि अस्पताल गएपनि माज्दाले गर्भपतन भने गराउँदिन राउधाको सल्लाह अनुसार । माज्दाको स्वास्थ्यमा असर परेपछि देश बाहिर उपचारको क्रममा खर्चको अभाव भई राउधाले म नै जिम्मेवार हुँ ठानेर आलोकको हाकिम इस्माइल जो राउधालाई धेरै अगाडिदेखि बिहेको प्रस्ताव गरिरहेको थियो । तर , बूढो स्माइललाई तरुनी राउधाले स्वीकार गरेकी थिइन् तर दिदी माज्दा र पिपुरोको लागि उसले आफ्नो जवानी बिहेको उपहारमा दिन्छे । फलस्वरूप माज्दा र पिपुरो जीवन पाएर देश फर्कन्छन् । पुलिसले आलोकलाई गिरफ्तार गर्दा राउधाले अझै घृणा गरेर मलाई भुल्न सकोस् ठानेर ऊ हाँसिदिन्छे । यो वृतान्त सुनेपछि राउधालाई आलोकले सम्मान गर्दछ ।
“एक सर्को माया” मा पौडेलले अन्त्यको भागमा पाठकको हृदयलाई समाएका छन् । घरमा बिहेको कुरा उठेपछि केटी हेर्न जाँदा त्यो पेन्ट लगाउँछन् जुन पहिलोपटक राउधालाई भेटेको दिन लगाएका थिए । गोजीको लाइटरले कथालाई उथलपुथल बनाएको छ । जुन लाइटर राउधाले मागेर फिर्ता गर्दा पानीमा खसेको थियोे । तर , त्यही लाइटर गोजीमा कसरी आयो ? आलोक चकित छन् । तृष्णाले छाडेर गएको क्लिप कसरी आलोकको बहिनी ज्योतिको हुनगयो ? तृष्णाले दिएको ठेगानामा पुग्दा त्यहाँ तृष्णा नाम गरेकी बुहारी नै छैन ।
यो कसरी भयो ? आलोकको प्रतिबिम्बले आलोकलाई तेरो राउधासँग भेट भएकै छैन्, तिमीहरू प्रेममा छैनौ उदाहरण सहित बताउँछ । जुन पुस्तकभित्र भेटिने छ । मस्तिष्कले सृजना गरेको हेलुसिनेसनसँग आँखाको अप्टिकल इलुजन मिलेर भएको यो प्रेममा रोचकता छ ।
उपन्यास पढिरहँदा भ्रम नै भ्रम भेटिन्छन् । जैरोल्डले सुनाएको कहानीमा सत्यता नहुनु । जेडीको बाको कथा पनि सत्य नहुनु । माज्दाकी बहिनी राउधा नभएर अरू नै कोही हुनु । माज्दा गर्भवती नहुनु । राउधा कुनै मोडल हुनु । कथाको गहिराइ यही छ ।
अन्त्यमा, पौडेलले तिर्खाएको पाठकलाई नदी देखाइदिएर मुखमा भने पट्टी बाँधिदिएका छन् । हालसालै लेखकको नवीनतमकृति ‘पहेँलपुर’ उपन्यास आएको छ । बजारले यस कृतिलाई “एक सर्को माया” कै दोस्रो रुप पनि भनिरहेको छ ।
प्रकाशित मिति : ६ मंसिर २०७८, सोमबार ४ : ५५ बजे